Moussa Sissoko oo doonaya inuu u dhaqaaqo Arsenal | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Moussa Sissoko oo doonaya inuu u dhaqaaqo Arsenal
Moussa Sissoko oo doonaya inuu u dhaqaaqo Arsenal
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 7-06-16 8:33 PM Ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Newcastle United Moussa Sissoko ayaa shaaaca ka qaaday in uu doonayo inuu ka dhaqaaqo garoonka St James’ Park xagaagan, islamarkaana uu doonayo inuu ku biiro Arsenal“.
26-sano-jirkan, isku diyaarinaya in uu guto waajibaadkiisa qaranka Euro 2016, ayaa si aad ah loo hadal haayay maalmihii dambe inuu ka tagayo Newcastle taas oo u laabatay heerka labaad ee horyaalka Championship.
waxaa la fahamsan yahay in laacibkan uusan diyaar u aheyn inuu heerka labaad ka ciyaaro waxaana uu ku riyoonayaaa ku biiritaanka Arsenal.
” waa ay igu adagtahay heerka aan ugu ciyaari lahaa Championship. waxaan doonayaa inaa sii wato hormarkeyga. waxaan doonayaa in aan qaado wadada saxda ah. Waxaan rabaa in aan baxo oo aan sii wato xirfadeyda ciyaareed ee England, una ciyaaro koox ka qeyb galeysa Champions League,” Sissoko ayaaa sidaasi u sheegay Foot Mercato.
” Arsenal waa mid kamida kooxaha ugu fiican Europe. Taasi qofkasta ayaa og, xitaa waxaa la socda caruurta yar yar, Arsenal waa koox aan jeclahay, maxaa yeelay waxaa soo maray ciyaaryahano reer French ah sida Thierry Henry, Robert Pires, Sylvain Wiltord, Patrick Vieira kuwaas oo aan jeclahay.
“waxaa koox qurux badan Arsenal. Waxaan arki doonaa. hadda ma sheegi karo in aan u dhaqaaqayo Arsenal. waayo waxaan ka wareerayaa ciyaararaha France ee Euro-ga.”
Arsenal ayaa sidoo kalew waxaa ay dooneysaa in ay soo xero galiso labo ciyaaryahan oo ka tirsan Leicester City waana Jamie Vardy iyo Riyad Mahrez.